कर्णालीको समृद्धिमा राराको योगदान – Sajha Bisaunee
कर्णालीको समृद्धिमा राराको योगदान
मुगु जिल्ला जति भौगोलिक विकटता छ, त्यो भन्दा पनि सयौं गुणाले रारा तालले प्रसिद्ध छ । त्यही भएर राजा महेन्द्र शाहले वि.सं. २०२० मा आफ्नो शासनकालमा रारा तालको भ्रमण गरेका थिए । ३.२ किलोमिटर चौडाई, एक सय ६७ मिटर गहिराइ, अधिकतम पाँच किलोमिटर लम्बाई र १०.८ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको रारातालले बिहानी सूर्यकोे किरणसँगै फरक–फरक रङमा देखिन्छ । रारा तालमा देखिने फरक रङसँगै रारा तालको नाम पनि पटक–पटक फेरियो ।
रारातालमा पुग्ने जो कोही पर्यटनकले रारा ताललाई आफूलाई मन पर्ने शब्दको नामले परिचित गराउन खोज्छन् । अनुपम महŒव रहेको रारा ताललाई महेन्द्रले गरेको भ्रमणको समयमा रारा ताललाई ‘स्वर्गकी अप्सरा’ भनेर उपनाम दिए । रारा ताललाई पहिला ‘रारा दह’ भनिन्थ्यो । महेन्द्रको भ्रमणपछि यसलाई ‘स्वर्गकी अप्सरा’ भन्दै ‘महेन्द्र ताल’ भन्न लगाए । रारा तालको पहिचान मेटिने गरी ‘महेन्द्र ताल’ नाम राखिएपछि रारा तालको नाम विवादीत बन्यो । नेपालका नवौं शाहवंशीय राजा महेन्द्रले रारा तालको दुरगार्मी महत्वलाई बुझेर ‘महेन्द्र ताल’ नामले रारा ताललाई परिचित गराउने खोजेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहपछिका सबै भन्दा स्वाभिमानी राष्ट्रवादी राष्ट्रनायक आफुलाई ठान्ने महेन्द्रले रारा तालको महत्व नेपालको स्वाभिमानसँग जोडिएको त्यसको ऐतिहासिक नामलाई मेट्दै महेन्द्रकीकरण गर्न खोज । जव महेन्द्रको शासनकाल समाप्त भएसँगै ‘महेन्द्र ताल’ को नाम हराउँदै गयो । पुनः ‘रारा ताल’ भन्ने गरियो ।
यसरी जति रारा तालको नाम विवादीत बन्दै गयो, त्यति रारा तालको नाम आम जनमानसको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भयो । महेन्द्रले राखेको ‘स्वर्गकी अप्सरा’ नामले रारा तालको महत्व शिखरमा पुग्न सफल भयो । समुन्द्र सतहदेखि २ हजार ९ सय ७२ मिटरको उचाइमा रहेको रारा ताल नेपालको सवै भन्दा ठूलो ताललाई शिखरमा राखि राख्नको लागि कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ को राराको डिलबाट उद्घाटन गरे । त्यसैले अहिले रारा तालको अध्ययन अवलोकन गर्ने पर्यटनको संख्या बढ्दै गएको छ । दैनिक २ हजारसम्म आन्तरीक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गरेका छन ।
रारा ताललाई यो उचाईसम्म पु¥याउनमा महेन्द्रको देन भएपनि रारा तालको इतिहास भेटाउँदै आफ्नो नामले रारा ताललाई परिचित गराउन खोज्नु महेन्द्रको मुर्खता थियो । रारा नामबाटै इ.स. १९७६ मा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरियो । १०६ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको निकुञ्जलाई रारा तालले अहिलेसम्म ओझेलमा पारेको छ । कस्तुरी मृग, थार, भालु, बँदेल, कालिज, डाँफे लगायएका बन्यजन्तु रहेको निकुञ्जमा ग्रीष्म ऋतुमा रारा तालको देखिने सुन्दरता सँगै विश्वमै नपाईने राम्रो हिमाली माछाले पर्यटनको जसरी मन जित्न सकेको छ, त्यसरी निकुञ्जले पर्यटकको मन जित्न सकेको छैन । रारा तालले विदेशी पर्यटनको जति मन तान्नु पर्ने हो, त्यति विदेशी पर्यटनको मन तान्न नसकेपनि आन्तरिक र छिमेकी देशका पर्यटकको मन तान्न सफल छ । रारा तालको रङ, वरिवरीको हरियो वन, रारा तालबाट तीन घण्टाको पैदल यात्रापछि पुगिने मुर्माटपबाट रारा तालको देखिने दृश्य, सिस्ने हिमाल, कान्जिरोवा हिमाल र सैपाल हिमालको श्रृङ्खला पर्यटनको पहिलो आकर्षणको केन्द्रविन्दु बन्छ ।
पर्यटनको लागि रारा ताल घुम्न जानको लागि उत्तम समय चैत्रदेखि जेष्ठसम्म र भदौदेखि मंसिर सम्म हो । अन्य समयमा रारातालको भ्रमणको लागि उपयुक्त मानिदैन । पूर्वडोल्पा, पश्चिम बाजुरा, उत्तर हुम्ला, दक्षिणमा जुम्ला र कालिकोट जिल्लासँग सीमा जोडिएको मुगुको जेष्ठदेखि असोज महिनासम्म फूल्ने फूलहरूले रारा ताललाई ‘स्वर्गकी सजिएकी अप्सरा’ जस्तै दृश्मा परिणत गरिदिन्छ । रारा तालको यात्राको क्रममा नजिकबाट नियाल्ने सकिने छहारा र पहाराबाट निस्किएका पानीका सदावहार झरनाका मनोरम दृश्यले जीवनका सवै दुःख कष्टलाई विसाईदिन्छ । रारा ताल मुगु जिल्ला र कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय स्थलमात्र नभई नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय स्थल हो । यसको संरक्षण, प्रर्वद्धन र प्रचार–प्रसार गर्नु सबैको दायित्व हो । देशको समृद्धिको लागी रारा तालसम्म सहज रूपमा पर्यटकलाई पुग्नको लागि काहालि लाग्दो सडकको स्तरोन्नती गरी बाह्रै महिना धुलाम्मे र हिलाम्मे समस्याबाट मुक्त बनाउनु पर्छ ।
रारा तालसम्म पर्यटकलाई पुग्नको लागि हवाई मार्ग भरपर्दाे भएको विश्वास पर्यटकहरूलाई दिलाउन सक्नुपर्दछ । रारा ताल नजिक पर्याप्त सेवा सुविधा सहितका होटल सञ्चालन गर्नु पर्र्दछ । ताल हेर्नको लागि पर्यटकको चाप जसरी बढ्दै गएको छ, त्यसरी नै सरकारले पर्यटकलाई सहज सेवा सुविधा उपलब्ध गराई रारा ताललाई अझै सुन्दर र सफा बनाउनमा ध्यान दिनु पर्दछ । रारा तालको विषयमा जति बाहिर बुझेर आनन्दित हुन सकिन्छ, त्यो भन्दा पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगाएतका अत्यावश्यक सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका तथा पिछडीएका मुगुका स्थानीयको समग्र क्षेत्रबाट माथि उठाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नु पर्छ ।
प्रकाशित मितिः ५ मंसिर २०७५, बुधबार १४:२२